Maxkamadda Ciidamadda Qalabka Sidda Somaaliya oo Xukuno ku riday Ragg Alshabaab katirsan – Radio Daljir
Maxkamadda Ciidamadda Qalabka Sidda Somaaliya oo Xukuno ku riday Ragg Alshabaab katirsan
Maarso 25, 2018 7:11 b 0
Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida ayaa saaka xukun ku ridday saddex qof oo lagu eedeeyay in qaraxyo lagu soo qabtay.
Maxkamadda ayaa dacwadda Raggan u fariisatay 17kii Bishan, kala ah Maxamed C/Raxmaan Maxamuud oo 30 jir ah, Jamaal Maxamed Cali iyo Axmed Aadan Weerar,kuwaas oo lagu eedeeyay in ay xubin ka noqdeen Al-shabaab.
Maxamed C/Raxmaan Maxamuud ayaa lagu eedeeyay in uu ka tirsanyahay Al-shabaab,Qaraxyada u qaabilsanyahay,sidoo kalena dadka bari jiray Qaraxyda.
Labada wiil ee kale ayaa lagu eedeeyay in ay Al-shabaab ka tirsanyihiin waxaana lagu soo qabtay Haan ay ka buuxaan walxaha qarxa oo ay ku hayeen Ceelasha Biyaha.
Madaxwaynihii hore Xasan Sheekh oo loo diiday dalkugalka Mareykanka